प्रियंकाले निक जोनससँगको तस्विर शेयर गर्दै लेखिन यस्तो क्याप्सन! - Bigul News
प्रियंकाले निक जोनससँगको तस्विर शेयर गर्दै लेखिन यस्तो क्याप्सन!
भदौ २९, २०७७ SLPA
प्रियंका चोपडा अहिले आफ्नो श्रीमान निक जोनससँग अमेरिकामा छिन्। कोरोनाको संक्रमणमा प्रियंका घरमा नै छिन्। यसैबीच उनी समय समयमा आफ्नो तस्विर शेयर गर्छिन्। आइतबार प्रियंकाले निकसँगको एक तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन्।
तस्विरमा प्रियंका र निक रोमांटिक मुडमा देखिएका छन्। प्रियंका र निक एकअर्काको हात समातेका छन्। यसका साथै प्रियंकाले क्याप्शनमा लेखिन् ,”सधैँ मेरो, म निकै भाग्यमानी छु।’ योभन्दा पहिला प्रियंका चोपडाले आफ्नो एक भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन जुनमा उनी अलग लुकमा रहेकी छन्। उनको नयाँ हेयरस्टाइलले प्रशंसकलाई ध्यान खिच्यो। प्रियंकाको यो लुक फिल्म ‘जंजीर’ मा रहेको थियो ।
यधपी यस पटक प्रियंका चोपडाले आफ्नो कपाललाई थोरै सानो गरेकी छन्। प्रियंका नयाँ ह’रर फीचर फिल्म लिएर आउंदै छिन् जसको नाम ‘एविल आई’ हो। प्रियंका चोपडा यस फिल्मको निर्माता हुन् । आफ्नो नयाँ फिल्मको जानकारी उनी आफैले गरेकी हुन्। प्रियंका चोपडा अन्तिमपटक बलिउड फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ मा देखिएकी थिइन्। यस फिल्ममा उनको साथ फरहान अख्तर र जायरा वसीम मुख्य भूमिकामा थिए। फिल्मको निर्देशन सोनाली बोसले गरेकी छन्।
प्रकाशित : सोमबार, भदौ २९, २०७७११:५२
यी अभिनेत्रीले गुप्त रूपमा जन्माइन पहिलो बच्चा, देखिईन सडकमा!
२७ मिनेट अगाडि SLPA